यस्तो छ महानगरका मेयरहरुको चुनावी प्रचार शैली, कुन पार्टीले कस्तो तयारी गर्दैछन् ? | suryakhabar.com
Home पु.समाचार यस्तो छ महानगरका मेयरहरुको चुनावी प्रचार शैली, कुन पार्टीले कस्तो तयारी गर्दैछन् ?
on: २७ बैशाख २०७४, बुधबार ०७:१५ In: पु.समाचारTags: कुन पार्टीले कस्तो तयारी गर्दैछन् ?, यस्तो छ महानगरका मेयरहरुको चुनावी प्रचार शैलीNo Comments
काठमाडौं । महानगरपालिकाका प्रमुख दलका मेयरका उम्मेदवारले चुनावी परिणाम आफ्नो पक्षमा पार्न प्रचारप्रसारका सबै शैली अपनाएका छन् । योसँगै उनीहरूको व्यस्तता पनि बढेको छ ।
महानगरमा कांग्रेसबाट मेयरका उम्मेदवार राजुराज जोशीको दैनिकी निकै व्यस्त छ । बिहान ४ बजे उठिसक्छन् । नित्य कर्म सक्दानसक्दै घरमा कार्यकर्ता जम्मा भइसक्छन् । कार्यकर्ता दिनभरको चुनावी प्रचार योजना बनाउन थाल्छन् । उनी भने फोन सम्पर्कमा व्यस्त हुन्छन् । हल्का ब्रेकफास्ट लिएपछि घरदैलो कार्यक्रममा निस्कन्छन् । उनी १२ बजेसम्म घरदैलोमा व्यस्त हुन्छन् । त्यसपछि चुनावी प्रचारप्रसारका लागि खोलिएको बागबजारस्थित कार्यालय पुग्छन् । केही समय अन्तर्वार्ता दिन्छन् । अनि पुनः घरदैलोमा निस्कन्छन् । बुधबारको नयाँ पत्रिकामा लेखिएको छ, उनको घरदैलो राति १० बजेसम्म जारी रहन्छ । ‘साता दिनदेखि व्यस्त सेड्युलमा चल्नुपरेको छ । खाना खाने फुर्सदसम्म छैन । घरदैलो, कोठेबैठक, योजना निर्माण र मिडियासँगको अन्तर्वार्तामै दिन बितेका छन्,’ उनले भने ।
एमालेबाट मेयरका उम्मेदवार विद्यासुन्दर शाक्यले पनि चुनावी परिणाम आफ्नो पक्षमा पार्न प्रचारप्रसारका सबै शैली अपनाएका छन् । उनी बिहान ५ बजे नै उठिसक्छन् । कालो चियासँगै उनी अन्तर्वार्ता दिन थाल्छन् । कार्यकर्ता भने दिनभरका चुनावी सेड्युल बनाउँछन् । ६ बज्दानबज्दै घरदैलोमा निस्कन्छन् । मध्याह्न १२ देखि १ बजेसम्म घरदैलो र कोठे बैठक चल्छ । त्यसपछि चुनावका लागि खोलिएको सम्पर्क कार्यालय पुग्छन् । केही बेरपछि पुनः घरदैलो कार्यक्रमका लागि निस्कन्छन् । यो क्रम रातको १० देखि ११ बजेसम्मै चल्छ ।
प्रचारप्रसारका लागि उनले मिडिया र सामाजिक सञ्जाल दुवैलाई भरपुर प्रयोग गरेका छन् । दैनिक दर्जनभन्दा धेरै मिडियामा अन्तर्वार्ता दिन्छन् । स्थानीय निर्वाचनका लागि भनेर पार्टीले खोलेको मिडिया सेन्टरमार्फत प्रचारप्रसार गर्न हतपत चुक्दैनन् । उनकै नाममा फेसबुक पेज छ । ‘चुनावमा प्रचारप्रसार गर्न आवश्यक छ । यसका लागि घरदैलोदेखि मिडिया, सामाजिक सञ्जाल प्रयोग गरेको छु । पार्टीले पनि प्रचारप्रसारमा सहयोग गरेको छ । कार्यक्रममा केन्द्रीय तहका नेता पनि सहभागी हुन्छन् । यसले प्रचारप्रसारलाई निकै सहयोग गरेको छ,’ उनले भने ।
माओवादी केन्द्रबाट मेयरका उम्मेदवार सर्वोत्तम डंगोल पनि प्रचारप्रसारमा दह्रिलो ढंगले उत्रिएका छन् । चुनावकै लागि भनेर उनी बिहान ५ बजे उठिसक्छन् । बिहान ६ बजदेखि घरदैलो कार्यक्रम सुरु हुन्छ । कोठे बैठक, राजनीतिक भेटघाट र घरदैलो कार्यक्रम सकिँदा दिउँसो १ बज्छ । खानाको कुनै टुंगो छैन । कार्यक्रम सकिएपछि असनमा खोलिएको अस्थायी कार्यालय पुग्छन् । चुनावी प्रचार प्रसारसम्बन्धी रणनीति बनाउँछन् । केही मिडियालाई अन्तर्वार्ता दिएपछि पुनः घरदैलो कार्यक्रम सुरु हुन्छ । रातको १० बजेसम्म उनी घरदैलोमै व्यस्त रहन्छन् । प्रचार प्रसारका लागि मिडिया र सामाजिक सञ्जाल दुवै बराबर प्रयोग गरेका छन् उनले । दैनिक १० भन्दा धेरै अन्तर्वार्ता मिडियालाई दिन्छन् । उनकै नाममा फेसबुक पेज छ । ‘प्रचारप्रसारको जमाना छ । चुनावमा त झन् प्रचारप्रसार निकै आवश्यक छ । सात दिनदेखि यसैमा व्यस्त छु । सामाजिक सञ्जाल पनि प्रयोग गरेको छु । पर्चा पनि छपाएको छु,’ उनले भने ।
ललितपुर महानगरबाट मेयरका उम्मेदवार हरिकृष्ण व्यञ्जनकारले मतदाताको अनुकूलता हेरेर चुनाव प्रचारप्रचार गर्दै आएका छन् । महानगर सहरी क्षेत्र भएकाले मतदाताको अनुकूलता हेरेर घरदैलो तथा भेटघाट गर्ने गरेको व्यञ्जनकारले बताए । बिहान ४ बजे नै उठेर आफ्ना कार्यक्रम बनाएर प्रचारप्रसारमा लागेको उनले बताए । उनी पनि बिहान ७ देखि राति ११ बजेसम्म घरदैलो तथा भेटघाटमा व्यस्त छन् । दिउँसोको समयमा बिहान बेलुका भेट्न नसकेका मतदातालाई भेट्ने गरेको व्यञ्जनकारले बताए । वडा वडामा मोटरसाइकलसँगै पैदल प्रचारप्रचारमा लागेको उनको भनाइ छ ।
ललितपुर महानगरबाट माओवादी केन्द्रका मेयर उम्मेदवार दिनेश महर्जन दीपेशले नियमित कार्यतालिका बनाएर प्रचारप्रसारलाई आक्रामक बनाएका छन् । बिहान ७ देखि ११ बजेसम्म र बेलुका ३ देखि ५ बजेसम्म घरदैलो, कोणसभा र अन्तरक्रियायामा सामेल हुने गरेको उनले जनकारी दिए । दिउँसोको खाली समयमा मतदातालाई प्रत्यक्ष रूपमा भेटेर आफ्नो पक्षमा मत पार्न लाग्ने गरेका छन् । चुनाव प्रचारप्रसार गर्दा माओवादीले भौगोलिक अवस्थाअनुसार गाडी र मोटरसाइकलको व्यवस्था गरेको छ । सहरको सुन्दरतालाई मध्यनजर गर्दै पर्चा, पम्प्लेट, ब्यानर कम प्रयोग गरिएको दीपेशले बताए । सूचना प्रविधिको विकासले मत आफ्नो पक्षमा पर्ने भएकाले समाजिक सञ्जाललाई पनि व्यापक रूपमा प्रयोग गरिएको छ ।
चुनावी प्रचारका लागि कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा चितवनको भरतपुर पुग्ने भएका छन् । ‘सभापति भरतपुरमा हुने चुनावी सभालाई सम्बोधन गर्न पुग्दै हुनुहुन्छ,’ देउवाका स्वकीय सचिव भानु देउवाले भने । सोही सभालाई प्रधानमन्त्री एवं माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले पनि सम्बोधन गर्ने माओवादी केन्द्र चितवनका इन्चार्ज ईश्वरीप्रसाद भट्टराईले जानकारी दिए ।
कांग्रेस केन्द्रीय सदस्य कल्याण गुरुङ संयुक्त रूपमा प्रचारप्रसार भइरहेको भन्दै बिहीबार संयुक्त सभा गर्ने तयारी भएको बताउँछन् । ‘तालमेलपछि पनि हामीले माओवादीसँग मिलेर संयुक्त प्रचारप्रसार गर्दै आएका छौँ,’ गुरुङले भने, ‘शीर्ष नेता नै बोलाएर बिहीबार संयुक्त सभा गर्ने तयारी छ ।’
भरतपुरलाई देशकै आकर्षण केन्द्र बनाउँछु: रेणु दाहाल
अब्बल छु, सेवाको अवसर दिनुस्: राप्रपाको मेयरका उम्मेदवार बद्रीप्रसाद तिमल्सिना
मेयरका उम्मेदवारहरूले एकैदिन कम्तीमा चार वडाका चुनावी सभालाई सम्बोधन गर्न भ्याएका छन । उम्मेदवारहरूले दिनभर आफूले गरेका गतिविधि र माग फेसबुक, पत्रपत्रिका, रेडियो, टेलिभिजनमार्फत जनतासामु पुयाउने गरेका छन् ।
Tags: कुन पार्टीले कस्तो तयारी गर्दैछन् ?यस्तो छ महानगरका मेयरहरुको चुनावी प्रचार शैली
आयल निगम र आईओसीबीच समझ्दारी
२७ बैशाख २०७४, बुधबार ०७:१५